Degmada Dayniile oo loo magacaabay Guddoomiye cusub maantana xilka kala wareegay Guddoomiyihii hore – idalenews.com
Degmada Dayniile oo loo magacaabay Guddoomiye cusub maantana xilka kala wareegay Guddoomiyihii hore
Guddoomiyihii hore ee degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho Daahir Xasan Xuseen ayaa ku wareejiyay maamulka degmada Dayniile guddoomiyaha cusub ee loo magacaabay.
Munaasabad xil wareejin ah ayaa waxa ay ka dhacday Xarunta Degmada Dayniile oo ka tirsan degmooyinka Gobalka Banaadir iyadoo degmada Dayniilana ay tahay mid ka mid ah degmooyinkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho oo soo gasha gacanta maamulka dowlada.
Munaasabadaasi ka soo qeyb galay madax iyo saraakiil ka tirsan Dowladda Federaalka, kuwaasi oo qaarkood khudbado ka jeediyay munaasabadda xil wareejinta.
Wareegto ka soo baxday Guddoomiyaha maamulka Gobolka Banaadir ayaa waxaa munaasabaddaasi ka hor akhriyay afhayeenka maamulka G/Banaadir Maxamed Cabdi Yuusuf oo sheegay in maamulka gobolka Guddoomiye cusub u magacaabay degmada Dayniile taariikhdu markay ahayd 18-ka bishii April 2013-ka.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Dayniile ayuu maamulka u magacaabay Mudanaha lagu magacaabo Xiireey Muxudiin Cumar oo uu sheegay inuu yahay shaqsi leh karti, khibrad iyo waaya aragnimada maamulka degmada Dayniile.
Guddoomiyihii hore ee deg. Dayniile Daahir Xasan Xuseen oo munaasabadda khudbad ka jeediyay, ayaa sheegay inuu la shaqeynayo Guddoomiyaha cusub, isagoona tilmaamay inuu si weyn ugu faraxsan yahay inuu xilka ku wareejiyo Guddoomiyaha cusub, taasi oo uu tilmaamay inay astaan u tahay habka dimoqoraadiga ah ee ka jira dalka.
Sidoo kale Guddoomiyaha cusub ee deg. Dayniile Xiireey Muxudiin Cumar ayaa ugu horeyn u mahad celiyay dhammaanba madaxdii iyo saraakiishii ka soo qeyb galay munaasabadda xil wareejinta, wuxuuna sidoo kale u mahad celiyay Guddoomiyihii hore ee degmaad Dayniile isagoo ballan qaaday inuu halkiisa ka sii wadayo howlaha uu qaranku u magacaabay.
Magaalada Balcad oo laga dareemayo Xiisado iyo dhaqdhaqaaqyo dagaal
AKHRISO MAGACYADDA:- Qoraal ka soo baxay Maxkamad ku taalla Maraykanka oo lagu soo bandhigay Magacyadda Ragg gacansaar la lahaayeen ragii isku qarxiyey Muqdisho